साउन १ देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
साउन १ देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
१७ चैत्र, २०७७ १७:१२ मा प्रकाशित
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार रिपोर्टस क्लबको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले साउन १ गतेदेखि वृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा गरेका हुन् ।
‘सरकार बनाउने वित्तिकै यो किन गरिएन त्यो किन गरिएन भनेर धुम मच्च्याइयो,’ उनले भने, ‘ कसैलाई आपत्ति लाग्ला। साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइनेछ।’
सरकारले नि:शुल्क कोरोनाविरुद्ध खोपको व्यवस्था गरेको र २० औं लाख जनताले लगाइ सकेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले रेल किनेर ल्याइसकेको र अब छिट्टै सञ्चालमा आउने दावी गरे।
खै कहाँ छ देशलाई संकट ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले मुलुकमा कुनै संकट नरहेको दावी गरेका छन् । मुलुक र जनतालाई अहिले कुनै पनि संकट नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘देश संकटमा छ भनेर गलत प्रचार भइरहेको छ । खै कहाँ छ संकट? जनतालाई संकट छ कि किसानलाई संकट छ कि ? तर म त कहीँ संकट देख्दिनँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पात्रहरुलाई निजी संकट हुनसक्ने बताउँदै भने, ‘देउवा, प्रचण्ड र माधवजीहरुलाई संकट परेको होला । तर देशलाई र संविधानलाई संकट छैन ।
फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि नै नेकपाको एकता भंग भइसकेको उनले दावी गरेका छन् । सर्वोच्चले पार्टी फेरि एकता गर्न १५ दिनभित्र नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा जान भनेको तर प्रचण्डले चासो नदिएको उनको आरोप थियो । साथै अदालतको फैसलापछि छलफल गरौं भन्दा प्रचण्डले नै इच्छा नदेखाएको ओलीले बताए ।